अस्ट्रेलियाको कृषिमा नेपाली घुमन्ते कामदार, दैनिक कमाउँछन् ५ सय डलर! :: हेमन्त काफ्ले :: Setopati
अस्ट्रेलियाको कृषिमा नेपाली घुमन्ते कामदार, दैनिक कमाउँछन् ५ सय डलर!
सिड्नी, चैत २५
अस्ट्रेलिया आएर समुन्द्री किनार र गगनचुम्बी भवनमा लोभिनेको संख्या कम छैन। सामाजिक सञ्जालमा छरिएका यस्ता तस्बिरले धेरैको मन बहकाएको हुन्छ। त्यसैले धनसँगै मनको बह पोख्न पनि मानिसहरू विदेसिन मरिहत्ते गर्छन्।
यसैबीच अस्ट्रेलिया आएर मनलाई काबुमा राखी धनका लागि घुमन्ते कामदारका रूपमा करिब तीन हजार नेपाली भिक्टोरिया र न्युसाउथवेल्स अनि दक्षिण अस्ट्रेलियाका गाउँबेसीमा मेलो काटिरहेका छन्।
सरकारी तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियामा वर्षेनी करिब एक लाख कृषि कामदारको आवश्यकता हुन्छ। यसको लागि अस्ट्रेलियाले छिमेकी मुलुकबाट पचासौं हजार कामदार भित्र्याईरहेको हुन्छ। यो सँगै बीसौं हजार घुमन्ते कामदार कृषि काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छन्।
राम्रो कमाइ हुने अस्ट्रेलियाको कृषि कामदारका रूपमा करिब तीन हजार नेपाली घुमन्ते कामदारका रूपमा वर्षैभरी विभिन्न फार्ममा काम गर्छन्।
न्यु साउथवेल्सका कप्स हार्वरको ब्लुबेरी टिपेर भिक्टोरियाको सेपाटनमा आरू र गोलभेडा अनि नास्पातीको सिजन सकेर एक हुल नेपाली युवा स्याउ टिप्न ब्राइट, न्यु साउथवेल्स, सनिक्रिकलगायतका ठाउँ पुगिसकेका छन्।
करिब २० जना कामदार लिएर सिजनभरि अस्ट्रेलिया घुमिरहने उनी मनग्गे कमाइ गर्छन्।
राष्ट्रिय खेलुकद परिषदका सदस्य र र्‍याफ्टीङ संघका केन्द्रिय अध्यक्षसमेत भइसकेका न्यौपानेलाई अस्ट्रेलिया आएकोमा कुनै पछुतो छैन। ‘हाम्रो तिर पनि काम गरेर खानेलाई गाह्रो भइसकेको छ, यहाँ काम गरेपछि आकर्षक तलब पाइन्छ, यतै रमाएको छु’, उनले भने।
न्यौपानेका अनुसार कृषि कामदार पेशामा म्याग्दी, बाग्लुङ र त्यस वरपरका क्षेत्रका मानिसको बाहुल्यता छ।
कृषि कामदारका रूपमा उन्नत फुलफूल खेतीका बारेमा अनुभव बटुल्न पाएकोमा खुसी छन् मान बहादुर। ‘केही वर्षपछि नेपाल गएर फुलफूल खेती गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाएको छ। एउटा गोलभेडाको बोटबाट दश किलोसम्म फल्ने र सानो ठाउँमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि हामीले नेपाल लग्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो’, उनले भने।
कुर्सीमा बसेर गर्ने काम पाउन अष्ट्रेलियामा गाह्रो हुने उनको तर्क छ।
‘विद्यार्थी र डिपेन्डेन्टलाई अस्ट्रेलियामा कुर्सीमा बसेर गर्ने काम पाउन मुश्किल छ, जुन काम गरे पनि आर्थिक जोहो गर्नुनै हो त्यसैले साथीभाइको सल्लाहमा कृषिमा लागियो’, श्रीमतीलाई शहरमा पढाउँदै आफू ग्रामिण भेगमा काम गर्दै हिँडेका सनम केसीले भने।
‘यहाँ जुनै काम गरे पनि कसैले हेयको दृष्टिले हेर्दैनन्। त्यही सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो’, उनले भने।
विगत पाँच वर्षदेखि कृषि कामदारको आपूर्ति गर्दै आएका पोखराका हर्क थापा यो पेशा अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा निकै आकर्षक रहेको बताउँछन्।
अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा दिपक विष्टलगायतले जुकुनीलगायतको तरकारी फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यसरी कृषि कामदार मात्र होइन बिस्तारै कृषकका रूपमा पनि नेपालीले अस्ट्रेलियामा आफ्नो पहिचान बढाउँदै लगेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २५, २०७८, ०७:२८:००